Features အသစ်တွေနဲ့ ပွဲထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ iOS 14 | Anycall Mobile
RKhar Min Thant,3weeks ago3min read 1749
မနေ့ညကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ WWDC ( Worldwide Developers Conference) မှာ Apple အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ iOS Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ iOS 14 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု iOS 14 အသစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ Android Users‌ တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Features အသစ်တွေလည်း ပါ၀င်လာပါတယ်။ အကြီးကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့ iOS 14 မှာ Android နဲ့ တူတဲ့ Features တွေပါလာလို့စိတ်မပျက်သွားပါနဲ့ဦး။ Android Users တွေတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေး‌တဲ့ Features တွေကိုလည်း Apple က iOS 14 မှာထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။
ကား ဒီလောက်ဆိုရင် စကားပလ္လင်ခံတာလေးကိုရပ်ပြီး iOS 14 မှာပါလာတဲ့ Features အသစ်တွေကို တချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် 😉
Android Users တွေအတွက်တော့ Widgets ‌ဆိုတာကို အချိန်တော်တော်ကြာရင်နှီးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ iPhone Users တွေအတွက်တော့ အခုမှ iOS 14 နဲ့အတူ Widgets တွေကို Home Screen မှာ ထည့်လို့ရလာတော့မှာပါ နည်းနည်းတော့ ကြောင်တယ်ဟုတ် :3
App Library ( App Drawer on Android :3)
iOS မှာ App Drawer မပါတဲ့အတွက် Apps တွေ အားလုံးက ဖုန်းရဲ့ Home Screen ပေါ်မှာပဲရှိနေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အခု iOS 14 မှာတော့ Android က App Drawer နဲ့ဆင်တူတဲ့ App Library ဆိုတဲ့ Feature အသစ်ကိုထည့်ပေးလာပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Home Screen မှာ Apps တွေတော်တော်များလာရင် ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ App ကိုရှာရတာတော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။ အခု App Library ကတော့ Home Screen ညာဘက်အဆုံးဘက်ကို Swipe လုပ်လိုက်ရင် Apps တွေဟာ Social ၊ Entertainment ၊ Recently Added apps ဆိုပြီး သူ့သီးသန့် Category ထဲမှာရှိသွားပါတယ်။ App Library ပါလာတာကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ Home Screen Pages တွေကိုလည်း Remove လုပ်လို့ရသွားပါတယ် ။ Home Screen မှာ Swipe ခဏခဏ လုပ်နေရတဲ့ ပြဿနာ ကင်းသွားတာပေါ့ ။ အခု App Library ဟာ App Drawer နဲ့ ဆင်ရုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ လုံး၀တူနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
iOS 14 မှာ Video တွေကို သင့်ရဲ့ iPhone မှာ ဘာပဲသုံးနေသုံးနေ ကြည့်လို့ရအောင် Support ပေးလာပါတယ်။ အဲ့လိုကြည့်လို့ရဖို့ ပထမဆုံး Video တစ်ခုကြည့်ပြီး Home Screen ကိုထွက်လိုက်ရင် Screen ရဲ့ ညာဘက်မှာ Gesture လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ့် ။အဲ့ Gesture ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ ခုဏကကြည့်‌ေနတဲ့ Video ဟာ ခပ်သေးသေး Box တစ်ခုထဲမှာ ပြပေးလာမှာဖြစ်ပြီး ဘယ် Apps ပဲသုံးနေသုံးနေ အဲ့ Box လေးက Float ဖြစ်နေမှာပါ။ Widgets မှာပြောထားသလိုပဲ Android Users တွေအဖို့ အခု Feature မျိုးကို သုံးလို့ရနေတာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ :3
ဒီ Feature ဟာလည်း Android Users တွေအတွက် ရင်းနှီးနေပြီးဖြစ်တဲ့ Feature တစ်ခုပါပဲ။
Default Apps ဆိုတာကတော့ Email, Calendar, Browser စတဲ့ Apps တွေကို ရှိနေပြီးသား Category တူတူ apps တွေအစား app တစ်ခုတည်းကိုပဲ Default အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။။
အရင်က Apple Users တွေအဖို့ အပေါ်ကလို Default Apps ရွေးထားဖို့ အခွင့်မကြုံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု iOS 14 ကြောင့် Default Apps တွေထားလို့ရတော့မှာပါ။ အခုလက်ရှိမှာ Mail နဲ့ Browser ကိုပဲ တစ်ခြား Apps အစားထိုးပြီး Default Apps ပြောင်းလို့ရဦးမှာပါ။ ကျန်တဲ့ Apps တွေမှာတော့ မရသေးပါဘူး။
အခု Siri လေးကတော iOS Users တွေအားလုံးသဘောကျလာမှာအသေအချာပါပဲ။ အရင်ကဆို Hey Siri လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Display တစ်ခုလုံးမှာ Siri ကပေါ်လာပါတယ်။ အခု iOS 14 မှာတော့ အဲ့လိုပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ပဲ Siri ဟာ Animated Icon ပုံစံသေးသေး‌လေးနဲ့ ဖုန်းရဲ့ Screen အောက်‌ခြေမှာပဲ ပေါ်လာတော့မှာပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ Experience ရမှာပါ။
အခု Apple ရဲ့ Messages ဟာ အရင်ကထက် 40% ပိုပြီး Messages တွေကို Handle လုပ်လာနိုင်ပါပြီ။ Group Messages တွေကိုလည်း အရင်ထက် ၂ ဆ အထိ Handle လုပ်လာနိုင်ပါပြီ။ Update အနေနဲ့ကတော့ Message ထဲက Conversation တွေကို Pin လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး Groups ထဲမှာ Mention ခေါ်လို့ရတာ‌ေတွ ၊ Reply လုပ်လို့ရတာတွေ လုပ်လို့ရလာပါပြီ။ Memoji အသစ်တွေလည်းပါ၀င်လာပါတယ်။
အရင်ကဆို ကျွန်တော်တို့ Apple Maps ကို Google Maps နဲ့ ယှဉ်ပြီးလှောင်ရယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ အဲ့လိုလှောင်လို့မရတော့ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အခု iOS 14 မှာ Update. ဖြစ်လာတဲ့ Apple Maps က Google Maps ကိုအစားထိုးသုံးလာနိုင်တဲ့အထိ ပိုကောင်းလာပြီမလို့ပါပဲ။ အခု Apple Maps မှာ Cycling Directions တွေ (နာမည်ကြီးမြို့ကြီးတွေမှာသာရသေး) ပါဝင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု App Clips ကတော့ WWDC 2020 မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Feature တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Apps တစ်ခုလုံးကို Download လုပ်စာရာမလိုပဲ သင်လိုအပ်တာကိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူရှာပြီးသုံးနိုင်မှာပါ။ ဉပမာအနေနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကော်ဖီသောက်ပြီးငွေရှင်းဖို့ App တစ်ခုခုကို Download လုပ်ရာမှာ App တစ်ခုလုံး Download လုပ်စရာမလိုပဲ App ထဲက ငွေချေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အပိုင်းကိုပဲ သုံးပြီး Apple Pay နဲ့ ၀င်ကာ ငွေချေလို့ရမှာပ‌ဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Feature ကတော့ သင့်ရဲ့ iPhone ကိုသုံးပြီး Car ကို NFC ကနေတစ်ဆင့် Unlock လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Feature ကိုတော့ 2021 BMW5Series တွေမှာစပြီးသံုးလို့ရလာမှာပါ။
အခု Feature ကတော့ ဖုန်းလာပြီဆို Display တစ်ခုလုံးမှာပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘဲ Widget သေးျသးလိုပုံစံလေးနဲ့ ဖုန်းလာနေကြောင်းဖော်ပြပေးလာမှာပါ။ Swipe တစ်ချက်လုပ်ရုံနဲ့ ဖုန်းကို Answer or decline လုပ်လို့ရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု App ကတော့ Google ရဲ့ Translate App လိုပါပဲ။ Language နှစ်ခုကိုယှဉ်ပြီး Translate လုပ်လို့ရလာပါမယ်။ Languages တေ‌ွကို Download လုပ်ထားပြီး Offline Translate လည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။
Privacy မှာတော့ သင့်အနေနဲ့ App တစ်ခုကို camera ဒါမှမဟုတ် microphone access ပေးထားတယ်ဆိုရင် ဖုန်း Screen အပေါ်က Status Bar မှာ orange dot‌ လေးပြပြီး Remind လုပ်ပေးသွားမှာပါ။
အခုဖော်ပြသွားတဲ့ အပေါ်က Feature တွေကတော့ iOS 14 မှာပါ၀င်လာမယ့် Features တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Beta Version အဖြစ်ကြော်ငြာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ချို့ Features တွေဟာ တရား၀င်ထွက်လာရင် အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။
iOS 14 တရား၀င်ထွက်လာမယ့်ရက်ကိုတော့ အတိအကျမသိရသေးပေမယ့် ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာထွက်လာဖို့ကတော့ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Apple အနေနဲ့ iOS Version အသစ်တိုင်းကို September လမှာ မိတ်ဆက်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ COVID-19 Pandemic ကြောင့် လအနည်းငယ်နောက်ကျပြီးမှ ထွက်လာနိုင်ပါတယ် လို့ပြောရင်း ပရိသတ်တို့ရော iOS 14 ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ? Android ဆီကပဲ ကူးချထားတယ်လို့မြင်လား ? ဒါမှမဟုတ် Android လိုမျိုး features တွေသုံးလာရလို့ သဘောကျရဲ့လား ဆိုတာကို အောက်က comment box ထဲမှာ ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးဗျ
Tags	#apple	#Car play	#iOS	#iOS 14	#Picture-in-Picture	#Siri
စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန့မွာ မိတ္ဆက္နုိင္တဲ့ iPhone အသစ္မ်ား